Kirasi Yakakwira yeSocial Media iri Kukundikana Isu | Martech Zone
Muchikoro chepamusoro chemwanasikana wangu vaive nenzvimbo yaive inoera kuvakuru vanonzi "mukuru rug". Iyo "yepamusoro rug" yaive chikamu chakasununguka chakavakirwa munzvimbo mune horo hombe dzechikoro chake chepamusoro uko vepamusoro kirasi vaigona kutandara. Hapana vatsva kana vechidiki kirasi vaitenderwa pa senior rug.
Zvinonzwika zvinoreva, handizvo here? Mune dzidziso, inopa vakuru nehana yekugona uye kudada. Uye pamwe zvinopa avo vepasi vekirasi nechishuwo chekukwira saka rimwe zuva rugi nderavo. Kunge chero kirasi system, zvakadaro, iyo njodzi ndiko kukura kwekuparadzanisa pakati pekirasi yepamusoro nevamwe.
Kudzoka mumazuva ekutanga enhau enhau, pakanga pasina kirasi system. Kana mumwe munhu akanyora hombe blog blog pane iyo blogosphere, isu tese takafadza munyori uye nekusimudzira yavo posvo. Muchokwadi, kwenguva yakareba ini ndaingosimudzira chete mablog mablog emablog matsva andakawana mukuyedza kuvakurudzira uye kuona kuti vawana chidimbu chevanoona. Vazhinji shamwari dzangu online nhasi vaive vanhu vakawana uye vakagovana yangu blog kana zvinopesana.
evanhu vezvenhau ane change. Kirasi system iri zvachose munzvimbo. Uye iyo yepamusoro kirasi iri kunyatso kupatsanura nyika kubva kune yavo "vakuru rug". Ini handisi chikamu chepamusoro kirasi, asi ndinoda kufunga kuti ndiri padyo. Asi dzimwe nguva hazvinzwe senge. Ini ndinosvika kune vakawanda mukirasi yepamusoro uye ivo havapindure. Ivo havapindure pa Twitter, Facebook, Google+ kana kunyangwe neemail.
kuburitsa: Iyi posvo inogona kunyatsotsanangura maitiro angu, futi. Ini handisi kushoropodza vamwe mune zvakanyanya sekungo tarisa shanduko mune yemagariro nhepfenyuro.
Zvino shamisa. Nepo vanhu ava vari kunyora mabhuku pasimba rezvemagariro venhau uye vachitaura nyaya dzavo dzemikana yavakapihwa nevamwe, vanoregeredza kutambanudza ruoko kune anotevera munhu. Ndakaverenga akawanda emablog avo uye ndoona matoni ezvekutaura kubva kuvateveri vakazvipira vari kudzokorodza, vachigovana nekuvakorokotedza pamusoro pezvakanaka zvemukati ... pasina mhinduro kubva kuna pundit. Hapana. Kwete peep.
Nekukura kweiyi indasitiri, ini handisi munzira yekutaura kuti chikumbiro chega chega chinofanirwa kupindurwa - huwandu hwacho hwakanyanya kukura. Ini, inini, ndaona zvisingaite kupindura kune zvese chikumbiro. Asi ini do edza. Kana hurukuro ikapenya pasocial network uye ini ndichiziva nezvazvo, ndinonzwa ndichimanikidzwa kujoina hurukuro. Ndicho chidiki icho chandingaite kupihwa kuti yangu yemagariro midhiya network yaisazove nemvumo dai isiri yemumwe muverengi uye muteveri.
Ini handisi kuzodoma mazita, uye handisi kuzoti ndeemunhu wese. Kune zvakawanda zvakasara. Nekudaro, kune zvekare zvakawanda zvemagariro enhau dombo nyeredzi dzisingadye yavo imbwa chikafu. Ivo vanoenda kunonyora mabhuku, kutaura uye kubvunza pamwe nemakambani makuru - kuvapopotera kana vasiri pachena kana kuroorana. Uyezve vanoshevedza vamwe vavo vepamusoro shamwari uye vanotaura navo pamusoro pebhodhoro rakanaka rewaini kuimba yemunharaunda yemupata - vachiregeredza network yavo.
Usatenda hype vanhu. Kana iwe uri kutevera mumwe weaya mahunyanzvi, kutenga mabhuku avo uye kuenda kunovaona vachitaura… tora maminetsi mashoma kuti uone basa ravo. Vanotevera nhungamiro yavo vamene here? Ivo vanopindura kune nyowani uye vechidiki pane yavo Facebook peji? Ivo vanodzokorodza mazwi makuru kubva kuvateveri vasina zvinotevera? Ivo vanoteedzera nhaurirano mumashoko avo e blog?
Kana vakasadaro, enda utsvage munhu anozviita! Dhonza rugi kubva pasi pavo.
Tags: rantevanhu vezvenhauvanyori venhau venhaunyanzvi dzezvemagariropasocial media gurussocial media speaker
Kukadzi 22, 2013 na3: 57 PM
Ndinoshuva dai ndaiti ndinobvumirana nezvakatumirwa, uye ndine chokwadi chekuti zvaunotaura zvine chokwadi kune vazhinji vevashandisi venhau uye mabloggi asi ini ndinozviona ndiri mudiki munyika yeku blogga uye handina kana chimwe chinhu kunze kwezviitiko zvakanaka zvinosvika kune vamwe vevakuru.
Ndakawana mhinduro kubva kune vamwe vevakuru vakadai saChris Brogan, Jason Falls, Scott Stratten, Dave Kerpen nezvimwewo ndakanyora nezvaDave Kerpen nemabhuku ake kakati wandei uye akagovana zvandaitumira pasocial network.
Kubva pane zvakaitika kwandiri ndakaona kuti vazhinji vevakomana vakuru mumasocial media vanoita zvavanoparidza, ndosaka vari kubudirira kudaro.
Kukadzi 22, 2013 na4: 09 PM
Izvo zvakanaka kuti unzwe, @mattsouthern: disqus! Zvinogona kungoita kuti ndiri bhinya. 🙂
Kukadzi 22, 2013 na4: 10 PM
Zvakanaka iwe pindura kumashoko ako eblog saka haugone kuve wakanyanya jere! 🙂
Kukadzi 22, 2013 na4: 49 PM
Douglas, Yikes! Ndinovimba ini handisi mu "yakaipa vakuru" chikamu. Ini ndinoda kufunga kuti ndinosvika, ndinopindura, uye ndinobatana. Kune vanhu here vandinogona kunge ndakaderedza munzira? Eheka. Pane dzimwe nguva apo ini (kana ndisingakwanise) kuita. Svondo rapfuura semuenzaniso ini ndaive ndiri kure kuPeru neBolivia uye ndaive nekushomeka kuwana iyo Webhu (ingangoita awa rimwe pazuva). Nezuro ndakanga ndiri mundiza kwemaawa gumi. Dzimwe nguva mushure mekutaura ndinowana mazana maviri kana mazana matatu ma tweets uye makumi mashanu shamwari dzepaFacebook. Ini handisi kupa zvikonzero, ndichingotaura chokwadi. Zvisinei, nguva zhinji, ndinoedza kuva anotaurika naye.
Kukadzi 22, 2013 na5: 02 PM
@douglaskarr: disqus @ google-4e3cce4e05af3f9a841d921fe02f1ea7: disqus @mattsheast: disqus Kucherekedza kwakanaka. Ini zvechokwadi ndinoona vamwe vevakuru vachigadzira "yakasarudzika makirabhu" ayo anosvika kune newbie nechinangwa chisiri chekubatana kwechokwadi, asi pachinzvimbo vachitarisira kuasungira netambo kune "yemahara" webinar iyo inozova nzvimbo yekutengesa. Chinhu chacho ndechekuti, kungofanana nevaya vari pamubhedha wevakuru, ivo vachazoda kuenda mberi nekushanduka, kana ivo pachavo vanozove ivo vakarasikirwa izvo zvakanamatira kudzokorora giredhi rechi12.
Ida iyo yekutaura nezve "kudzokorora 12th giredhi"! Kune zvakare fananidzo yeavo vanhu vanobva kusekondari avo vachiri kugara pamba, vachipomba gasi, uye vachiratidzira pamazuva avo ekuve nyeredzi yenhabvu seyakanyanya kunaka iyo ichave iri kwavari.
Kukadzi 22, 2013 na5: 11 PM
Izvi zvinoshamisa here. Iwo manejimendi manejimendi anga achiparidza simba reshanduko, asi ndiwo anonyanya kushora shanduko. CHOKWADI: vachiri kuita SAP sezvavaive makore makumi maviri apfuura. Nekudaro, iyo "yemagariro enhau gurus" ingori mazano. Uye rangarira, chipangamazano mukomana anoziva nzira chiuru dzekuita rudo, asi asina musikana. (kuzivisa: Ini ndaive Partner neimwe yeiyo Big20)
Mune yangu nyaya zvirinani, ini handisi mubatsiri. Ini ndinonyora mabhuku, ndinopa hurukuro, ndinomhanya masterclass, ndinoita kudzidzisa, uye ndinogara pamazano ekupa mazano. Nekudaro, kweanopfuura makore matanhatu ini handina kuita chero kubvunza.
Kukadzi 22, 2013 na6: 45 PM
Ndakave nemafungiro akafanana, ndakanyora kare .. zvakadaro 'mileage inogona kusiyana' mamiriro. SaMat ndakaona uye vakasangana ne'vakuru 'vachifamba hurukuro yavo uye sekuvaona kwawavaita .. kwete zvakanyanya. Ndakaona mashoma achipaza muzvikamu zvavo kuti nditaure, asi ndichiona vamwe vakasiyiwa. Kufunga nezvevaya vanoita kuti kutenderera kuenderere mberi .. tinogona kuona kana vanachipangamazano vedu vasingaite zvavanoparidza, kana tikatenga mabhuku, tichienda kuhurukuro, kubhadhara mari dzakakura dzekubvunza, tinya mabhatani nemabheji uye ramba uchitamba mutambo iwoyo. . Saka handina chokwadi chekuti ndivo vari kutitadza .. mutengi beware handiti?
Parizvino tarisiro yangu ndini. Ndiri kuedza kusafunganya zvakanyanya nezvevamwe, zvinhu zvandisingakwanise kudzora. Ndiri kuzoramba ndichiita chinhu changu, shanda nesimba pakuita zvimwe, ndichiitira zvirinani, ini vatengi vangu, biz rangu. FWIW.
@douglas, pamwe zvauri kutaura ndezvechokwadi, pamwe zvakaitika kwauri, pamwe "vakuru" vari kusvika padanho kupindura chete kune nhaurirano dzinoitwa wih vakomana vakuru pavanowedzera kukosha ... asi hwaro hwezviri kutaurwa zvinonzwika kunge zvisirizvo. Kusvika padanho repamusoro pasocial media hakuite kuti iwe upindure kune yega yega posvo kana chirevo, kana kune zvakatumirwa izvo zvingangodaro zvisingawedzere kukosha. Mukupedzisira, ndosaka vari pano (vachiwedzera zvinonhuwira mukutaura). Uye kune vamwe vakaita sa @David Meerman, isu hazvigoneke kuzviita (kunze kwekunge aripira mubatsiri).
Ndakaongorora pfungwa yekuve nemubatsiri. Asi ini ndafunga kuti hapana imwe nzira inobvira yekuti ini ndive nemumwe munhu atore chikamu pasocial kushandisa zita rangu. Hapana nzira. Kana iine zita rangu pairi, ndakanyora. Ndakaudza vanhu vakaita saGuy Kawasaki kuti ndinoda izvo zvavanoita asi handibvumirane nekuzvitumira nekutumira nevanobatsira.
Kukadzi 24, 2013 na2: 39 PM
Kutanga, ini ndinobvuma uye ndinosimbisa kukura kwekujekesa muSocial Media uye mushandi wayo "Muteveri-chikepe". Chechipiri, vamwe vanhu vakasarudza kusaziva kuvhara bandwidth, zvinyorwa, uye -mumabhokisi nekubvuma zvisina musoro zvirevo uye "Retweets". Chekupedzisira, uhwu hupenyu. HAUTI kuwana menduru kungo ratidzira-kumusoro. Chibvumirano chechokwadi chinokumbira mhinduro; "Ditto-misoro" usadaro.
Douglas Marjorie Clayman akangonyora nezve izvi neimwe nzira yakasarudzika- tsinga imwe chete. Ndanga ndiri ndichigamuchira kupera kweizvi makore mana apfuura uye ndakakatyamadzwa ipapo uye ikozvino. Zviito zvavo zvaive zvisingaenderane nezvavakataura, ndakadzidza nekukurumidza kuti ndiani aive akazara ne ^ * (.
Zvinoshungurudza kana iwe ukaona maitiro akadaro uye ndobva ndangoti whateva, ndakaramba ndakatarisa pane zvandaive ndichirima bhizinesi rangu. Kune rimwe divi renyonganiso iyi, ini ndoziva nhanho imwe neimwe yenzira, nekuendesa kukosha kune vateereri vhiki rega rega - muteereri wese watinayo we #BBSradio akauya nekufamba hurukuro yangu uye kwete nekuti munhu weA-rondedzero akandisimudzira kune avo "vateereri. ”
Ini ndaigona kupaza mashoma nekugovana matauriro avakaita neni kuseri kwezviitiko. Ini ndakadzidza nekukasira, vanonetsekana nezve chimiro chavo kana pauya mumwe munhu akangwara sezvavari uye zvinonyadzisa. Ini ndinoda kusimudzira avo vakandikomberedza uye ndoziva kuti isu tese tinogona kukura. Izvo hazvitore kubva kune mumwe kune mumwe kana mumwe wedu akabudirira, pachinzvimbo zvinokudza kubudirira kwedu tese.